Maxay tahay ujeeddada booqashada madaxweynaha Jubaland ee Muqdisho? - BBC News Somali
Maxay tahay ujeeddada booqashada madaxweynaha Jubaland ee Muqdisho?
Image caption Axmed Madoobe ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata inay soo afjareyso khilaafkii kala dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada, iyadoo maanta uu Muqdisho gaaray madaxweynaha Jubakand Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa galinkii hore ee maanta si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana qaabilay wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan dowladda Federaalka.
Falanqayn: Iskaashigii maamul goboleedyada weli ma nool yahay?
Cabdiwali Gaas kadib waa sidee xaaladda madaxdii ku haray iskaashiga maamul goboleedyada?
Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin ujeeddada uu madaxweynaha Jubaland u tagay magaalo madaxda Soomaaliya, ilo ku dhow madaxtooyada Jubaland ayaa BBC-da u sheegay in arrintan ay qeyb ka tahay dhameystirka wadahadallada u dhaxeeya madaxda maamulkaas iyo dowladda dhexe.
Image caption Madax ka tirsan dowladda federaalka ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha Jubaland
Waxaa la filayaa in Axmned Madoobe uu kulamo khaas ah la yeesho madaxda sare ee dowladda, iyagoo laga dhowrayo inay sii amba qaadaan dadaallada lagu xoojinayo wada shaqeyntooda.
Mala soo afjaray khilaafkii u dhaxeeyay labada dhinac?
Horay ayuu Axmed Maxamed Islaam u sheegay in xal laga gaaray qeyb ka mid ah ismariwaagii u dhaxeeyay maamulkiisa iyo madaxtooyada Soomaaliya, inta harsanna lagu dhameystiri doono kulamo ka dhici doona magaalada Muqdisho.
Safarka madaxweynaha Jubaland uu ku tagay Muqdisho ayaa daba socda booqashadii uu 11-kii bishan Maarso magaalada Kismaayo ku gaaray Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Image caption 11-kii bishan ayuu Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tagay magaalada Kismaayo
Wafdiga Ra'iisul wasaaraha oo si diirran loogu qaabilay Kismaayo ayaa kulamo la soo yeeshay madaxda Jubaland, iyagoo u xusul duubayay in xal laga gaaro xurguftii siyaasadeed ee ka dhaxeysay maamulka Jubaland iyo dowladda Dhexe.
Intii uu Kheyre ku sugnaa Kismaayo ayuu madaxweynaha Jubaland ballan qaaday in uu markiisa booqan doono magaalada Muqdisho, halkaasoo uu sheegay in uusan marti ku noqon doonin.
"Madaxda dowladda dhexe Kismaayo waa gurigooda martina kuma noqonayaan, anigana Muqdisho waa gurigeyga martina ku nioqon maayo", ayuu yidhi Axmed Madoobe.
Image caption Shantii hoggaamiye ee aasaasay iskaashigii maamul goboleedyada
Maamulka Jubaland ayaa dhowr bilood ka hor udub dhexaad u ahaa madaxda maamul goboleedyada ee xiriirka u jaray dowladda dhexe, waxaana uu marti galiyay shirkii ugu horreeyay ee ay isugu imaanayeen madaxweyneyaaasha maamullada Soomaaliya ee ka soo hor jeeday dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxay kulankaas ka soo saareen go'aan ay xiriirka ugu jareen dowladda dhexe.
Hase ahaatee, golihii iskaashiga maamul goboledyada oo ku billowday awood saameyn leh ayaa ugu dambeyn kala dhantaalmay ka dib markii ay meesha ka baxeen qaar ka mid ah madaxdii maamullada ee muhiimka u ahaa.